I-bungalow ethokomele enokubukwa kolwandle okumangalisayo, ingadi eyimfihlo - I-Airbnb
I-bungalow ethokomele enokubukwa kolwandle okumangalisayo, ingadi eyimfihlo
Kaş, Antalya, i-Turkey
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Britta
U-Britta Ungumbungazi ovelele
Indawo yesitayela se-studio inombhede olala abantu ababili ongu-1 kanye nombhede olala umuntu oyedwa. Iqhele ngamamitha-skwele angu-40 ne-patio. Ngaphakathi ; kuneshawa,indlu yangasese nekhishi. Inendawo enhle yokubuka kanye nengadi yayo. Ngenxa yesakhiwo sayo sokhuni, singashisa phakathi nosuku, ikakhulukazi ngo-July nango-August, futhi ngokuphambene nalokho, yindawo epholile kakhulu ebusuku.
I-Kas peninsula nayo inombono omuhle kakhulu wemvelo nolwandle. Ingenye yezindawo ezizolile, ezithulile futhi ezinokuthula zokuhlala e-Kaş. Indawo eyingqayizivele yabantu abathanda ukuthintana nemvelo.
4.82 · 73 okushiwo abanye
Indawo yesitayela se-studio inombhede olala abantu ababili ongu-1 kanye nombhede olala umuntu oyedwa. Iqhele ngamamitha-skwele angu-40 ne-patio. Ngaphakathi ; kuneshawa,indlu yangasese nekhishi. Inendawo enhle yokubuka kanye nengadi yayo. Ngenxa yesakhiwo sayo sokhuni, singashisa phakathi nosuku, ikakhulukazi ngo-July nango-August, futhi ngokuphambene nalokho, yindawo yethu epholile kakhulu ebusuku. Ingenye yezindawo ezizolile, ezithulile futhi ezinokuthula zokuhlala e-Kaş. Indawo eyingqayizivele yabantu abathanda ukuthintana nemvelo. Izivakashi zethu ezihlala e-bungalow yethu, esendaweni yokuphumula ye-villa, zingazuza kuwo wonke amasevisi afana nendawo yokubhukuda nengadi enikezwa ezinye izivakashi zethu ezihlala ekhephini le-villa.
Phakathi nosuku, siphinde sibe nekhefu le-villa ngezikhathi ezithile mayelana nendawo yokubhukuda, ukunakekelwa kwengadi nezinkinga zobuchwepheshe. Sizama ukunikeza usizo nokusekelwa ezivakashini zethu ngangokunokwenzeka.
UBritta Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Français, Deutsch, Español, Türkçe